Robin van Persie Iyo Rio Ferdinand Oo Magacaabay Laacib Si
Robin van Persie iyo Rio Ferdinand ayaa isku waafaqay in hal ciyaartoy oo ka tirsan Arsenal uu ahaa halyeyga lama filaanka ah ee sababta u noqday in Gunners ay u gudubto finalka FA Cup.
Arsenal ayaa guul weyn oo 2-0 ah ka gaadhay Manchester City, waxaanay u ahayd usbuuc farxadeed oo ay wada garaaceen Liverpool iyo Manchester City oo mid walba ay laba gool ka dhaliyeen.
Guusha ugu dambaysay ee Semi-finalka FA Cup, waxa wacdaro dhigay laacibka reer Gabon ee Aubameyang oo laba gool dhaliyey, kuwo kalena ku dhowaaday, laakiin shaqada ugu badan ee Arsenal waxa qabtay difaaca reer Brazil ee David Luiz oo iska maydhay ceebihii kasoo gaadhay Is-aaragii hore ee Man City ee bishii June.
Ruug-caddaaga reer Brazil ayaa loo aqoonsaday geesiga Arsenal ee guusha ka caawiyey kooxdiisa, tartankana ka reebay Man City, kaddib markii uu u babac-dhigay, goolkiisana ka ilaaliyey weerarka daadka ah ee Sky Blues.
Qaabka isfahamka uu ula samaystay Shkodran Mustafi iyo Kieran Tierney, waxay ahayd si aanay cidina sii saadaalin, waxaana u raacday in isaga oo aan culays dareemayn uu khatar kasta isku dhigayay, goolkiisa oo nadiif ahna ay ciyaartu dhamaatay.
Weeraryahankii hore ee Arsenal iyo Manchester United ee Robin van Persie oo soo xushay xiddigii Arsenal sababta ugu ahaa guusha ayaa waxa uu sheegay in shaqada ugu badan ee Gunners ayna tahay in looga mahad celiyo uu qabtay David Luiz, waxaana arrintan ku raacay halyeygii hore ee Manchester United ee Rio Ferdinand.
Van Persie oo fadhiyey telefishanka BT Sports oo uu ciyaarta ka falanqaynayay ayaa waxa uu yidhi: “Waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo dhab ahaantii ku wanaagsanaa in la daawado. Waxay u ciyaareen si isku duuban. Qaybtii labaad, waxaad arki karaysay City ay hore iskaga riixayso, laakiin mar walba way cufnaayeen.
“Waxaan jecelahay inaan tilmaamo ciyaartoygii ugu wanaagsanaa, waana David Luiz oo aynu hore uga hadalnay, laakiin caawa jidhkiisa kubadda u dhigaya, waxaanu difaacay illaa 25 kubbadood, waana mid cajiib ah.”
Rio Ferdinand oo garab fadhiyey Van Perside ayaa isaguna yidhi: “Waan kugu raacsanahay.”